Umhla My Pet » 5 Iimpazamo Amadoda Yenza Oko kunokulonakalisa ulwalamano
5 Iimpazamo Amadoda Yenza Oko kunokulonakalisa ulwalamano
ukubuyekezwa: Jul. 04 2020 | 3 min ukufunda
Uninzi lwabantu kweli hlabathi hlobo, abantu emangalisayo ngeentliziyo enkulu kangaka kweli nqaku sele kungekho ndlela dissing kubo. Oku malunga 5% ngubani musa unaloo. Nangona kuloo 5% kukho ayisiyiyo abantu abaninzi abalungileyo, izinto mfana nje akulungile okanye mhlawumbi ke andifumananga lowo ke abo baza kuwa phezu ngasemva ukwenza yonke into. Kweli nqaku ndiza babhale ezintlanu iindlela apho olu 5% kunokulonakalisa ulwalamano.
Into xa umntu cheats kukuba kusenokwenzeka azikho ukuba uthando kunye umntu, kunye. Xa mfo eluthandweni nomntu nje yena akayi ngokukrexeza kuba wonke akuyonto xa kuthelekiswa. Oku akuthethi ukuba uthi akafuni khangela kwaye ungabona ukuba umntu zintle ngenkangeleko. Ndicinga ukuba sonke elele ukuba sithi xa be se kulwalamano akazange kodwa umahluko xa ngokundithanda, musani ukwenza kuyo. Ngoko xa mfo cheats ibonisa ukuba ukuba ngothando kunye neqabane lakhe kwaye idala nokunqongophala kwentembeko ukuba kakhulu lezibini andinakuza umva.
IZenzo Like A komore
Bekusoloko krwada asiyo Jonga cool. Kodwa kukho oobhuti ngelishwa ucinga ukuba. Bambi bade bacinge ukuba upholile kwaye “ukuba umntu asebenze” nento yonke inkunkuma. Akanyanzelekanga ukuba usebenza ngayo iintyatyambo imizuzu emihlanu rhoqo kodwa ke oko akuthethi ukuba kakhulu nje ukuba krwada. Ngendlela ndiyasiqonda isizathu sokuba eninzi guys amaxesha enze oku ukuba ayinguwe komore nzulu ezantsi. Abantu abaninzi benza ngathi yonke inkwenkwe embi umntu kodwa ndiyacinga apho unxibelelwano inqamla ubungacacanga kukho kukuba bafuna inkwenkwe embi kunye ngubani kubaphatha kakuhle kubo ngentliziyo entle kwaye ukuba kukho umahluko omkhulu phakathi inkwenkwe embi unentliziyo elungileyo kwaye umntu okrwada kuwe, lahluma uhle lonke ixesha. Ndicinga inceba amaxesha zibonwe ubuthathaka xa ngokwenyani ukuba ungamandla kwaye uninzi ubudlelwane banobuchule apho abantu baphathane kakuhle.
Hits Partner yabo
Njengoko eli nqaku malunga guys mna ukubhala kule ndawo malunga mfo embetha iqabane kodwa eli candelo, ngathi wonke icandelo kuyo, esingasetyenziswa izinto umfazi esenza ukuba kunokulonakalisa ulwalamano kakhulu ngoko ke akukho ndlela esithi guys kuphela betha namaqabane awo. Ndiza kuquka oku kuba yeyona nto umntu ugliest onokuyenza yaye ngokuqinisekileyo uyeke ubudlelwane ukusuka inkqubela yaye ngokuqinisekileyo kufuneka ayeke ukuba. Musa ukuvumela nabani kungakhathaliseki ukuba uyamthanda kangakanani ukuba athethe nawe ngeenxa ukuba buhlungu emzimbeni.
Beka Wonke Omnye Umntu phambi kwakho
Xa abanobudlelwane elide, ukuba iqela. Bona akufanelanga uzibe kuyinyamezela iintsapho zabo, abahlobo, wonke phambi kwakho kwaye ufumane ingcebiso yabo lonke ixesha phezu yakho. Ngecala lakho kusenokwenzeka ukuba kufuneka uzifake kwimeko apho kufuneka ukhethe kodwa ukuba uyeza kwinto efana unina nangakuthandiyo kwaye ufuna ukuba ayichithe nawe, ukuba ndiyakuthanda ukuba bandifake wena nolwalamano lwakho lokuqala.
Ukuzinzisa Kuba Best Second
Ndicinga ukuba sonke xa thina ibhaso intuthuzelo. se nokuba ba nothando omnye umntu kwaye wawa okanye abazange bavakalelwa ngendlela efanayo kubo benjenjalo yokuhlala wena kwaye zange kubekho isiseko esihle ubudlelwane. Ndiyacinga ukuba sonke kumfuna irytale, xhobo irytale kuthetha kuthi, kwaye abantu abaninzi baphele bethetha nomntu ukuze ukuba abe yedwa leyo ngokwayo luhlobo iyaqondakala kodwa akulungile xa icala umntu uziva ngathi ubomi babo umntu irytale zabo ngelixa kwelinye umntu ubona nje ngowona ngebenze emva umntu wayemthanda ke bemnka imeko efana ukuba ekuhambeni kwexesha usoloko eliphela newu.
Imithetho ezintandathu Inokukunceda Lawula Pet Partner wakho